Zvita. Kusarudzwa kwezvitsva zvekupedza gore | Current Literature
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Novela, Nyaya
December, rimwe gore raenda. Ichi chimwe kusarudzwa kwezvinhu zvitsva kutaura zvakanaka nemazita ezvido zvese, kubva kuKisimusi yekare kusvika kunhau dzichangoburwa dzehit terevhizheni inoteedzana uye yakachena uye yakapusa hunhu inogara ichipfuura ngano. Tinotarisa.
1 Kisimusi Tales - Various Vanyori
2 Mukati meSquid Game (Unofficial Instruction Manual) - Park Minjoon
3 Kune Zvisingaperi - Percy Bysshe Shelley
4 Mazuva ano, feminism uye dambudziko pakati pemazana emakore - Emilia Pardo Bazán
5 Mafia anogara patafura - Jacques Kermoal naMartine Bartolomei
6 Yakasimba kupfuura gomo rinoputika - Abián San Gil, María Sánchez, Gabi Martínez, Ander Izagirre naElsa Mabel López
Kisimusi ngano - Vanyori vakasiyana
Usati watanga sei zvekare pakati pezvinyakare zvemazuva ekupedzisira egore nemhemberero dzayo dzinonyanya kuratidza. Uye chii chiri nani kupfuura nyaya dzeKisimusi, kunyangwe muchokwadi chero nguva yakanaka kuverenga nyaya. Uku ndiko kuunganidzwa kwavo kwakasainwa nevanyori vakaita se Hama Grimm kana Hans Christian Andersen kusvika asvika Ray Bradbury uye nekufamba nenyaya nevanyori vezana ramakore rechiXNUMX nezvekukosha kweOscar Wilde, dickens o Chekhov. Saka tine mazita akadai Mabiko eKisimusi, The jumply dwarf, The Tin Soldier kana The Snow Queen.
Mumutambo squid (Unofficial Instruction Manual) - Park Minjoon
Zvanga zva nhevedzano yegore, yekukakavadzana uye yakakurumbira zvikamu zvakaenzana, saka zvaive zvine musoro kuti nyika yekuburitsa yakatora mukana wekudhonza. Iri bhuku rekuraira ndere a gwara nezvake uye nezvese zvinotora kuti uwane zvakanyanya kubva muchikamu chese. Pane ruzivo nezve nyaya, vatambi, zvakavanzika zvemutambo wega wega uye kuti ungazvikunda sei ... Muchidimbu, ne uye kune vateveri vasina zvimiro.
Varipi Vekusingaperi - Percy Bysshe Shelley
Uye kune vanoda detembo rakanyanya kunaka remhando yemhando yakadai se Percy Bysshe Shelley, ndizvo izvi anthology, yakakwana kusvika ikozvino, iyo mudetembi, munyori wezvinyorwa uye mushanduri akashandura Jose Luis Rey. Mariri iwe unogona kuwana iyo inofungidzirwa Shelley uye yakanyanya kugutsikana neiyo yekuona uye inosunungura kugona kwenhetembo. Mukuwedzera, inoratidzwa mu edition yemitauro miviri kuti unakirwe nemashoko ekutanga.
Mazuvano, feminism uye dambudziko pakati pemazana emakore - Emilia Pardo Bazan
To dona Emilia Pardo Bazan unofanira kugara uchiiverenga, kwete chete nokuda kwebasa rake rekunyora zvakanyanya, asi nokuda kwekukosha kwake semumwe wevanonyanya kukosha vakangwara vekupedzisira kweXNUMXth uye kutanga kwezana remakore rechiXNUMX. Munyori, munyori wezvinyorwa, mutori wenhau, munyori (manovhero uye nyaya pfupi), mufambi, mutauri, munyori wemitambo, munyori wenhoroondo uye mutsoropodzi wezvinyorwa, munyori wezvekudya uye mushanduri, basa iri rinosanganisira musangano -uyo muParis muchirimo cha1899- uye hurukuro ina: Valencia, Orense, Madrid uye Salamanca. (1899-1905), iyo inoperekedzwa nechinyorwa (1901) yeruzivo nezve Joaquín Costa, Oligarquía uye caciquismo sezvimiro zvehurumende muSpain.
Mafia anogara patafura - Jacques Kermoal naMartine Bartolomei
Un kuda kuziva zita seanopikisa ndeiyi yakasainwa nevatori venhau vaviri vekuFrance kwavanotiudza nezvazvo menyu, mabikirwo uye waini iyo yakatora nzvimbo yakakosha mune gastronomy weMafia. Izvi ndizvo, semuenzaniso, iyo yakarongeka kugadzirira kumhara kwaGaribaldi kuMarsala muna 1860 kana iyo yakapemberera Maranzano "kutora" kweBronx. Uye mamwe mabiko mazhinji avaiitira kupemberera ekuyeukwa uye kubudirira kana kuronga mazano uye mhosva.
Yakasimba kudarika gomo rinoputika - Abián San Gil, María Sánchez, Gabi Martínez, Ander Izagirre naElsa Mabel López
Ndiri kuguma nenguva inoshamisa-yatinoramba tichirarama, kunyanya uye zvinosuruvarisa, vagari veCanary Island yeLa Palma. The kuputika kwegomo reCumbre Vieja Musi wa19 Gunyana, iyo inoramba ichishanda, yakagadzira misoro uye mifananidzo yeterevhizheni kwese kwese. Zvino uyu anobuda bhuku rekubatana.
Iine mifananidzo yemutori wemifananidzo palmero Abian San Gil, chirevo chemubiki Jose Andres (2021 Princess of Asturias Mubairo weConcord) uye zvinyorwa zve Elsa Lopez, munyori anonyanya kuzivikanwa uye anodiwa paLa Palma, uye Ander Izagirre, Gabi Martinez y Maria Sanchez. Vese vakada kuratidza zvinoshamisa zvechisikigo chiitiko uye manzwiro emanzwiro akaitenderedza muhunhu hwayo hwakawanda uye inofamba. Chiitiko chakaburitsawo mhepo huru ye rutsigiro nekubatana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Zvita. Kusarudzwa kwezvitsva zvekupedza gore
Bhuku reRudo Rwakanaka